Mashruuc dadka Hawlgabka ah dib Uga shaqaysiinaya, oo faa,iido dhalay dalka Japan | Biyoguurenews.com
Home Wararka Mashruuc dadka Hawlgabka ah dib Uga shaqaysiinaya, oo faa,iido dhalay dalka Japan
Mashruuc dadka Hawlgabka ah dib Uga shaqaysiinaya, oo faa,iido dhalay dalka Japan
Dadka gaboowga ah ee dhaafay da’dii lagu shaqaynayay ayaa shaqooyin cusub loo yeelay dalka Japan si cimrigooda inta ka dhiman ay ugu dhamaystaan farxad iyo firfircooni.
Barnaamijkan oo ay dowladda soo hindistay ayaa waxaa ka mid ah in dadka da’doodu kor u dhaaftay 70 jir ka ay u shaqo tagaan goobaha waxbarashada carruurta aadka u yaryar ee far baradka ah iyo shaqooyin kale oo loogu talogalay.
Seishi Omori waa nin Japan u dhashay oo 70 jir ah, kana mid ah dadka ka faa’iideysanaya shaqooyinkan ayaa yiri “In aad carruuraha ag joogto waxa ay ku siinaysaa tamar cusub, hadda waxaan leeyahay shaqo joogto ah, waxaanan dareemayaa in aan bulshada qeyb ka ahay”.
Ninkan ayaa markii uu shaqadiisii hore ka fariistay, waxa uu dareemay kalinimo iyo welwel badan, balse waxa uu markii dambe iska diiwaangaliyay barnaamijka dowladda oo ah mid saacadaha la shaqeeyo ay yihiin kuwa uu qofka xulanayo.
Dadka da’da weyn ee Japaan ayaa aad usii kordhaya sannad kasta marka la barbardhigo kuwa dhallinyarada ah, sidaas darteed waxa ay dowladda doonaysaa in ay ka faa’iideysato dadkan, iyagana siiso fursad labaad oo nolosha ah.
Haweenay lagu magacaabo Prof Hiroko Akiyama ayaa ka mid ah dadka gaboowga noqday, hadda waxa ay shaqo ka heshay jaamacadda Tokyo, iyada oo wax barta dadka waaweyn.
“Waxaan ka fikiraynaa sidii aan u qorsheyn lahaa 100 sanno oo nolol wanaagsan ah” ayay tiri Prof Hiroko Akiyama.
Dowladda Japan ayaa xitaa dadka waaweyn u dhistay guryo gaar ah oo leh wiish, iyo adeegyo kale , sida kuwa caafimaad oo joogto ah, si wax kasta loogu fududeeyo.
Maadaamaa dadka dalkan ay yihiin kuwa dhaqan ahaan shaqada aad u jecel, waxaa aad u badan dadka gaboobay ee isu diiwaangalinaya barnaamijka ay dowladda biloowday.
Previous articleWasiirka Waxbarashada somaliland oo Fashiliyey Ganacase boob ku dhisanaya Dhul Isguulkii ugu horeeyay Hargeysa leeyahay
Next articleGarissa: 3 Qof oo Bullaacad ku Dhacay